Dhawaan, waxaa jira tiro badan oo ah fanaaniinta xirfadeed iyo hiwaayadda kuwaas oo raadinaya set kaamil ah music video qaadashada software oo ay u isticmaali karaan diyaarinta ay music video. Iyada oo qayb weyn ka mid ah dadka ay raadinayaan qaadashada software music video ah in uu noqon doono lacag la'aan ah! Ka dib oo dhan, kuwaas oo aan jeclaan lahaa in la isticmaalo freeware u siinaya in ay heli karaa gargaarka ka fiican tahay qaar ka mid ah kuwa ka bixisay!
Sida xal u yahay kuwa fannaaniin xirfad leh iyo hiwaayadda kuwaas oo raadinaya qaar ka mid ah software free music video samaynta waxtar leh, Waxaan falanqeyn iyo soocaa soo 10ka ugu waxtarka free music video dejiyeyaasha halkaas. Akhri iyo ogaato go'an in ay taageeri doonto baahidaada.
Raadinta software in load weyn xamili karaan serially? U ogolow noo bari si Zwein Stein. Nidaamka compositing video iyo tafatirka aan toosan Tani waa freeware ah xaliyay loogu talagalay taas oo qaar ka mid ah qaababka ugu horumarsan in aan la arkin meel kale bixisaa.
Waxaad edit karaa ilaa 256 videos, Cajalado, weli image clips, mid kasta ilaa ugu badnaan 64 saamaynta Xidhan serially. Waxaad u jeclaan doonaa interface fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan. Waxaa la qorsheeyo doonaa wax uun aad rabto inuu noqdo ah. Abuurka, panning, iyo saamaynta caadadii si fudud loo sameyn karaa Click here to si toos ah oo muhiim ah.
Waxaa laga yaabaa in cillado kaliya ee barnaamijkan in caanuhu hoos u yihiin, waxa si tartiib ah u shaqeeyo marka barnaamijyada kale ee la socda, oo ma taageeri warbaahinta dibadda ciyaaro qalabka.
Gebogebadii qaababka, software this hubaal waa abuurkii la yaab leh.
Waxay leedahay non-toosan feature video tafatirka yaab iyo interface gebi ahaanba waa mid muujisa nidaamka AVID xirfadeed. Waxaa qabsan kara, edit, clip, geeddi-socodka iyo wax soo saarka labada audio iyo video habka kaliya aad u baahan tahay in uu noqdo.
Waxaa la dhisay si fiican u ah in badan oo ka mid ah software ka tartamaya xirfad ma fursad ah ee tartanka markii la bilaabay. Dhab ahaantii, AVID Free DV ahayd si loo jecel yahay in AVID Technology waxay go'aansatay inay xidho barnaamijkan sida ay dareemeen waxaa la tartan gelinaya la AVID iyaga u gaar ah wax soo saarka Pro.
Inkastoo AVID Technology ayaa joojiyo software this rasmi ah, AVID Free DV ayaa weli loo yaqaan oo ay isticmaalaan dad badan oo ka mid ah taageerayaasha ay adduunka oo dhan.
Haddii aad tahay fanaan oo u software si sahlan loo isticmaalo oo dhan muuqaalada aasaasiga ah ee loo baahan yahay in la sameeyo music video ah ayaa doonaya, arrintani waa wax waa in aad baadhid.
Wax isticmaalaa xawaaraha ee naqshadeynta ah kaarka video computer ee la abuurayo saamaynta fiican in waqtiga dhabta ah. Compositing Top-hoos iyo hababka compositing kala duwan waxaa lagu sameyn karaa on video aan xad lahayn oo kuwan raadkaygay audio. Samee saamaynta heer sare leh plugins iyo kala guurka 2D iyo 3D. Koobanahay la isticmaalayo qalab 3D aan caadi ahayn oo loo abuuro walxaha 3D fiican, nalalka, iyo Hooskooda, matoorrada text iwm Rotomate abuurkiinna iyo waxa ay qaadan si heer cusub oo dhan. Mid ka mid ah qaababka ugu fiican ee Wax ah waa in ay taageertaa badan oo kala duwan plugins u isticmaala in ay uga faa'iideysan awooddeeda si ay heerka ugu sareeya. Aqbasho File iyo wax soo saarka la samayn karaa iyada oo sida diirada. SDK Filter ayaa diyaar u ah fududaato in la isticmaalo. The qaabab AVI iyo regelingen taageeraan audio Tifaftirayaasha adigoo isticmaalaya Audio Codecs rakibay aad PC.
The cillado in jiid Wax hoos uga darajo wayn waa yar yihiin laakiin dhab ahaantii wax ku ool ah. Its kari waayeen in ay la garoonka iyo timbre heerka audio qaban waa khasaare ugu horeysay ee weyn ee. Mid ka xigta waa in ay sidoo kale noqon karaa mid gaabis ah in PC la qaabeynta hooseeyo sababta oo ah noocyada badan ee fur-tago.
Tani software free waxaa dhisay users jecel DJ guriga iyo hawlaha music isku qasin. Iyada oo dhammaan qaababka caadiga ah lagama maarmaan u qaabeynta aad music, fudud ah si ay u fahmaan interface u video samaynta jidka kaliya ee aad rabto in ay noqon, oo ay DJ iminka sidii ay tahay muuqashada - Waxaad gabi ahaanba jeclaan doono software this.
Waxaad baari karaa garaac halkii daqiiqadii aad iyo sidoo kale qabtaan furayaasha ogaanshaha dhibaatooyinka harmonic. Waxay leedahay bangiga clip u ciyaaro video clips ah; waqtiga dhabta ah record-iyo-badbaadin feature of music galay kombiyuutarka; dhabta ah markii loo shubay internetka ee kalfadhi; computer ku garaacday Roobka u qodan dalwaddii; interface aad u dareen leh.
Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah darida yar oo barnaamijkan, waxa aan la xiran kartaa qalabka muusikada sida gitaarka korontada, iyo keyboard. Plus caanuhu ku qaadan meel disk sida aad door bidayso. Haddii aad u malaynayso in aad tahay raaxo leh in, markaas taasi waa waxa aad raadinayso.
Sony ayaa horey ugu dhawaaqay in software ACID Xpress waa version xorta ah ee ay abaalmarinta ku guuleystay qalab abuurka music. Xpress ACID waxay ku dhisan tahay si ay u xalliyaan oo dhan baahida suuragalka ah ee abuurista music ah dadka isticmaala ay. Freeware Tani waa version 10-track ee ACID software diiwaangelin, music, tafatir oo isku dhafka ah.
Waxa ay u ogolaataa Wabka tafatirka MIDI. Dhacdooyin badan la diyaarin karaa per track. Track Video goolasha waa la heli karaa. Waxaad si toos ah codkaaga gelin kara la duubo audio nool. Awoodda-in lagu qoro feature waa la heli karaa. Encode Unlimited MP3 files. Ku raaxayso xarunta of kale ah taageero saxiixa mar. Waxaad si fudud u baran karo sida loo isticmaalo codsiga adigoo isticmaalaya tutorial ah is-dhexgal "i tusi sidaud". Beege baqshad feature barbaro sidoo kale waa la heli karaa.
Guud ahaan, software tani waxaa la dhisay daacad oo dhan qaybaha looga baahan yahay xidhxidheen u galay.
Isticmaal iyo abuuro sida aad doonayso inaad music video sida habka aad rabto.
Rank 5. Qase
Inkastoo Qase inta badan waa dhuumo abuurka 3D, waxaa sidoo kale la dhisay la audio aad u awood badan iyo video la abuuro awoodaha.
Days waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan videos music heerka Maestro isticmaalaya ay Sound iskugu xigxigaan Editor (SSE) oo ah qayb ka mid ah Video Editor iskugu xigxigaan (VSE). Waxaa ku jira ah oo multi-track Audio horumarintooda qalabeed. Users ayaa ku dari kartaa files regelingen ka disk adag sida file a, ama sida encoded gudahood filim, ka dibna iyaga oo isticmaalaya isku daraan qalooca soo xaroota ah loo xakameeyo mugga. Voice duubo waxaa la samayn karaa si toos ah u Qase iyo hagaajinta heerka garoonka iyo xawaaraha file ka. Days bedelno video kula VSE iyo dhammaataan waxaa la fadhiisiyo Audio ah si ay u sameeyaan dhamaystiran music video. Haddii loo baahdo, users xitaa abuuri karaan characters la isticmaalayo ay feature abuurka 3D ka dibna u isticmaalaan la video file ah ee hadda jira iyo file maqal ah si ay u sameeyaan characters cusub. Xitaa dhaqdhaqaaqa afka ah shayga dhaceen la beehsa kartaa file maqal ah oo isticmaalaya days.
Waxaa laga yaabaa in labada dhaca weyn ee la isticmaalayo days waa in ay u baahan tahay in khabiir days a in la abuuro a music video kaamil ah sida barnaamijka uu leeyahay interface ah mid aad u adag oo ma taageeri isticmaalka qalab dibadda.
Rank 4. Video FX Music Video Kan sameeyey,
Video FX Music Video Uumahaaga hodan ku ah qaababka loo baahan yahay diyaarinta aad Music Video iyo wadaaga u soo baxay si uu adduunka ka qalab Android aad.
Barnaamijku waxa uu la dhisay-in dejiya audio iyo Converter u AAC, ogg, regelingen iyo m4a audio kuwan raadkaygay. Waxay leedahay in ka badan 50 saamaynta wadar ahaan: Film, Ruuxa, Kartuunka, iyakana, filimada, Stroboscope, kulul, Mirror iyo kuwo kale oo badan. Si fudud u dooro file mp3 on qalab aad u isticmaali ama aad makarafoonka. Waxay leedahay feature Start Saacad taas oo kuu ogolaaneysaa in aad dib u dhigto duubo ee clip kasta oo ku siin waqti ay ku diyaar garoobaan duubo. Feature hakin Auto kaa caawinaysaa in aad si yara duubo si toos ah oo aan la taabashada badhanka hakin ah. Hab weeraryahanka Fast waa la heli karaa. Diiwaan filimada Waxa uu ka dhisay-in-ciyaaryahan u soo daawashada aad ugu jeceshahay. Waxa ay taageertaa camera hore iyo kan danbaba aad telefoon / kiniin u fududaato in duubo. Plus waxa uu helay muujinta la yaab leh dareen in idinka dhigi doonaa inaad u jeclaataa sida ay ka hawl aad u. Last laakiin hubaal ma yaraan, waxay u saamaxdaa in YouTube, Facebook iyo shabakadaha kale ee bulshada la wadaago la qasabno yar.
Qaababka oo dhan Gebogebadii, taasi waa hubaal app ah soo jiidan doona inta badan casriga ah music video sameeyayaal.
Tani waxay kala duwanaansho ah ee Ubuntu waa tartan adag oo u tartamaya badan oo xirfad leh halkaas. Iyada oo kala duwan oo ka mid ah barnaamijyada multimedia iyo abuuridda content u audio, muuqaallo kale, video, sawir iyo daabacaadda - Ubuntu Studio diiradda saarayaa qanceen dadka isticmaala ay il freeware furan jecel.
Rakibayo waxay leedahay plugin ah kaas oo u ogolaanaya u user inaad doorato baakadaha si loo soo dajiyo - audio, video, naqshadeynta, sawir iyo daabacaadda. Ubuntu ayaa waxay awood habkaani si users ma u baahan tahay si loo soo dajiyo oo dhan baakadaha ah. Ubuntu Studio Galiyo Linux low-Telcom code la Linux generic si loo horumariyo streamlines iyo ku dhaqmaan oo dhan Linux isbedel guud si sax ah.
Qaab-dhismeedka menu Its ka shaqeeya deegaanka wax desktop. Waxay leedahay DVD nool; Gui rakibo ku salaysan; yaruna qarsoon hoos u rakibay by default. Duwanaansho Tani loogu talagalay oo loogu talagalay in lagu audio, video iyo graphic enthusiast GNU / Linux ee gabi ahaanba waa abuur fiican kooxda Ubuntu.
Tani Suite la yaab leh oo lacag la'aan ah ee Apple, dhisay macruufka iyo Mac yimaado gadashada qalab kasta oo Mac ama macruufka. iLife la sameeyo ee wax looga qabanayo oo dhan baahida multimedia ee isticmaala. Waa wada shaqeyn ka mid ah qaar ka mid ah codsiyada awood leh in shaqeyn karaan natiijada cajiib ah.
iLife 2013 waxaa ku jira GarageBand, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u abuuraan music ama podcasts. Its digital audio Kundarbetsplats iyo music sequencer fududeeyey diiwaan galin kartaa lana ciyaari dib kuwan raadkaygay badan oo maqal ah. Ayaa dhisay-in shaandhada audio isticmaali caadiga ah Unit Audio ogolaaday user si kor loogu qaado wadada audio la saamaynta kala duwan. 16-bit iyo 24-yara Resolution Audio lagu duubay. Waxaa Gurtida qalabka nidaamka la qabsiga garoonka, taas oo ku dayan karaan saamayn Auto-Tune ka dib markii soco wixii ugu badnaan. Waxaa ka mid ah tiro balaadhan oo ah alaabta software dalwaddii oo loo isticmaali karaa si ay u abuuraan walxuhu asalka ah ama ciyaaro music live adigoo isticmaalaya ay "feature makiinada muusikada" iyadoo la adeegsanayo keyboard MIDI USB ah oo ku xiran in ay computer ka, ah dalwaddii keyboard on-screen, ama by isticmaalka keyboard QWERTY ah. Waxay leedahay muuqaalada gitaarka u fiican in isticmaali kartaa noocyo kala duwan oo Sammeecado Yururb, sanduuqyada aanad cadho burburin, iyo Processor saamaynta. Xitaa aad ku xidhan karto kabanka in Macs isticmaalaya interface USB ah ama talooyin ka dhisay-in. Safafka Wide goobaha tafatirka MIDI waxaa laga heli karaa. A ururinta weyn ee duruusta muusikada waxaa la helay ee GarageBand ayaa cashar Store. Waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah heesaha caanka ah sida raali by OneRepublic, Angel by Sarah McLachlan iyo kuwo kale oo badan. Dheeraad ah oo ah iyadana sida hayaa Jam iyo MainStage loogu daray saamaynta iyadoo la adeegsanayo Tools Remix, Habsami Section, Symphony Orchestra, World Music iyo Voices, 40 dhisay-in alaabta muusikada ah oo ay ku jiraan teebabka guridda, iyo mashiinka durbaan ayaa dhamaantood ka mid ahaa galay tan Codsiga la yaab leh.
Ka dib markii aad audio dhex app GarageBand, isticmaal app iMovie ee iLife kor u taagaysa video kaamil ah oo aad maqal ah. Qor aad goobta isticmaalaya camera aad Apple qalab ama dejinta sawiro ka Photo Book of iPhoto, app kale oo iLife 2013. Ka dib ururinta dhammaan waxyaabaha aad cayriin ee iMovie ah, u isticmaalaan iMovie ee awoodda video abuurka diyaarinta ah maskaxda ku-dabayl video. IMovie cusub ayaa la dayac tiray ee macruufka 7 muuqashada badan macaan iyo nadiifiye oo aan u baahnayn isticmaala in la abuuro mashruuc ama wax ka bedel mar dambe; waxay si fudud u dooran kartaa oo ka jaftaa wadaagaan hal-abuurka. iMovie ogolaataa user ay u abuuraan filimada HD iyadaba isjiidka Hollywood-style. Its kala duwan ee saamaynta iyo qalab dhigaya ay fasalka u gaar ah ee xirfadaha video tafatirka. Ka dib markii aad music video, ku raaxaysatid masterpiece ee Theater iMovie ah.
iLife 2013, sida xaqiiqada ah waa fikrad cajiib ah oo Apple. Laakiin waxaa jira hal feature in taageeray hoos ka hoggaamiyaha software music video Samaynta. Si aad u ogaato waxa feature in uu yahay, u akhri warbixinta ee soo socda iyo software ugu fiican, waxaannu aragnay in ka our falanqaynta.
Haddii ay ku saabsan tahay video tafatirka, ama tafatir audio - Lightworks by Editshare LLC weeraryahanka dhigeysa wax shirkadaha kale marnaba awoodin inuu sameeyo. Its taageero cross madal ka daran oo aan horay loo arag dabacsanaan waxaa hoggaamiye in ay suuqa iyo mid ka mid ah barnaamijyada adeegsadaan qaar ka mid ah abaalmarinta Oscar iyo Emmy guusha filimada sida Mission Impossible, Fiction saxarka, Batman, Boqorka ee hadalka iyo kuwo kale oo badan ka dhigaa. Waxay hayaan taageero ballaadhan qaab heli karaa NLE kasta oo xirfad leh, weelasha MXF, QuickTime iyo AVI, ku dhawaad ​​qaab kasta oo haatan diyaar u ah soo degida natively aan baahida loo qabo in transcoding, ka ProRes, Apple Qaraarka Pro, AVCHD (la AC3 audio), H. 264, DNxHD AVID, AVC-Intra, DPX, DVCPRO HD, RED R3D, XDCAM hore / HD 422, MPEG-2 I-jir ah (SD Labada iyo HD), MPEG-2 Long GOP, isku xigxigta, Image sida BMP, jpeg, PNG , TPA, DPX Tifaftirayaasha TGA, TIF oo dhan waqtiga isku-waqtiga dhabta ah. Waxa kale oo ay baahin karo Wave qaab leh dhibic iyo fursadaha timecode jir non-dhibic labada.
Versions waxaa dhisay harsan Intel, chipsets AMD iyo motherboards. Lightworks taageertaa Windows, Linux (Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Buoni, Fedora 19) iyo waxa ay hadda soo koraya u Mac OS X sidoo.
Lightworks waa ay awoodaan in ay dardar video processing adigoo isticmaalaya xoogga computer ee naqshadeynta card / chipset. Laga bilaabo jaritaanka sare, maamulka warbaahinta, taageero stereoscoping, saamaynta waqtiga dhabta ah oo ay ku jiraan correctors midabka sare kala duwan, si qamaar qanjidhada audio, timbres, garoonka tafatirka, taageeridda qalabka hardware dibadda, qaybsiga iyo koombiyuutarka inay webka, YouTube iyo vimeo - waxaa ka mid ah feature kasta oo loo baahan yahay samaynta dhamaystiran multimedia u qabtay qalab tifaftirka. Oo taageerada laba kun workflows la saameynta waqtiga dhabta ah, Lightworks u taagan sidii codsiga tafatirka ugu horumarsan heli karo muddo ka badan 20 sano.
> Resource > Video > Top 10 Free Music Video Rinjiga